रसुवागढी र साञ्जेनको आईपिओ खुल्दै, कति पाइन्छ भर्न ?
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी र साञ्जेन जलविद्युत कम्पनीले साधारण शेयर (आईपिओ) निष्काशन गर्ने भएका छन् । दुबै कम्पनीले २०७६ वैशाख ६ गतेदेखि आईपिओ निष्कासन गर्ने भएका हुन् । आइपीओका लागि वैशाख १० गतेसम्म आवेदन...
लगानी सम्मेलन : १७ वटा परियोजनाका लागि लगानीकर्ताको आवेदन
काठमाडौं । दुई दिनसम्म चलेको लगानी सम्मेलनमा १७ वटा परियोजनाका लागि लगानीकर्ताले आवेदन दिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । लगानीकर्ताले आगामी २० अप्रिलसम्म आवेदन दिन सक्ने...
पोखरा । डी लाइफ स्टाइलसको आधिकारीक विक्रेता सिताज लाइफस्टाइलले नेपालीहरुको महान चाड दशैँ, तिहार र छटको अबसरमा भदौँ २५ गतेबाट सुरु गरेको चार वटा विधा मध्यको अन्तिम स्किम एप्रिला एस एक्स बाइक १२५ सि.सिको...
सुनचांदीको बजार मुल्य ह्वातै बढ्यो , हेर्नुस बजारभाउ !
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आज आईतवार नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको छ । शुक्रबार सुन प्रति तोला ६२ हजार १ सयमा कारोबार भएको थियो भने आज सुन प्रति तोला ६२ हजार ५ सयमा कारोबार...
ब्याजदर नघटे देशव्यापी आन्दोलन
काठमाडौं । बैंकहरुले तत्काल ऋणको ब्याजदर नघटाए आन्दोलनमा उत्रिने उद्योगी व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याज घटाउनका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । विराटनगरमा आयोजित ब्याजदर...
सुनचांदीको मुल्य बढ्यो , हेर्नुस आजको बजारभाउ !
काठमाडौं । साताको पाँचौ दिन आज बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको छ । आज तोलामा १ सय रुपैयाले बढेको हो । हिजो सुन प्रति तोला ६१ हजार ६ सयमा कारोबार भएको थियो भने आज...
आज घट्यो सुनचांदीको बजार मुल्य , हेर्नुस आजको बजारभाउ !
काठमाडौं। साताको चौथो दिन आज बुधबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेको छ । आज तोलामा २ सय रुपैयाले घटेको हो । हिजो सुन प्रति तोला ६१ हजार ८ सयमा कारोबार भएको थियो भने आज सुन...
हेर्नुस् आजको विनिमय दर, कुन बढ्यो कुन घट्यो ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले (फागुन १) लागि एक अमेरीकी डलरको खरिद मूल्य ११२ रुपैयाँ ८३ पैसा तोकेको छ । यसैगरी बिक्री मूल्य ११३ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ । एक युरोको खरिददर १२७ रुपैयाँ...
सुनचांदीको बजार मुल्य घट्दै, हेर्नुस आजको बजारभाउ
काठमाडौं । साताको तेश्रो दिन आज मंगलवार नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेको छ । आज तोलामा २ सय रुपैयाले घटेको हो । हिजो सुन प्रति तोला ६२ हजार ८ सयमा कारोबार भएको थियो भने आज...